नेप्से बुधबार ५.१७ अंकले घटेर १२२५.९० विन्दुमा, कारोबार रकम २५ करोड - Financial Notices
मंसिर २०,२०७६ / ०५ : १९
नेप्से बुधबार ५.१७ अंकले घटेर १२२५.९० विन्दुमा, कारोबार रकम २५ करोड
Financial Notices 2076-4-29
बुधबार नेप्से सूचक ५.१७ अंकले घटेर १२२५.९० विन्दुमा पुग्दा १६९ वटा कम्पनीको १० लाख ६९ हजार ६९० कित्ता शेयर २५ करोड ७२ लाख रुपैयाँमा खरिद बिक्री भयो। कारोबार भएका समूहमध्ये माइक्रोफाइनान्स हरियो देखिएको छ । वाणिज्य बैंक समूहको सूचक ६.४९ अंकले घटेको छ भने कारोबार रकम अघिल्लो दिनको तुलनामा झण्डै २३ करोड रुपैयाँले खुम्चिएको छ। ४१ कम्पनीको मात्र शेयरमूल्य बढेको छ। २५ कम्पनीको शेयरमूल्य स्थिर रहेको छ ।
बुधबार नेपाल बैंकको सबैभन्दा धेरै २ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भयो भने रसुवागढी हाइ्रोपावर, नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंक र प्रभु बैंकको १ करोड रुपैयाँभन्दा धेरैको शेयर कारोबार भएको छ । बुधबार उच्च कारोबार गर्ने शिर्ष १० कम्पनीमा ७ वटा वाणिज्य बैंक छन् भने ३ वटा हाइड्रोपावर कम्पनी रहेका छन् ।
लघुवित्ततर्फ विजय लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयरमूल्य ४ दशमलव २६ प्रतिशत बढेको छ । कम्पनीको शेयरमूल्यमा प्रतिकित्ता रू। २५ ले वृद्धि भई रू. ६१२ पुगेको छ । दोस्रोमा एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीको शेयरमूल्य २ दशमलव ५३ प्रतिशत बढेर प्रति कित्ता रू. ६८९ मा बन्द भएको छ । वर्ल्ड मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्सको शेयरमूल्य ५ दशलमव ३० प्रतिशत घटेर रू. १०७ मा सिमित भएको छ ।
उत्त दिन बैंकिङ, होटल, विकास बैंक, जलविद्युत, वित्त, निर्जीवन बीमा, उत्पादन तथा प्रशोधन, अन्य, जीवन बीमा र म्युचुअल फन्ड समूहको परिसूचक १ प्रतिशतभन्दा कम घटेका छन् ।